Abafazi beHormones abaxhamli bee-series powder-A powder powder
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini
Singabesifazana beHormones abaphakeli beefowder, Abafazi bamaHormones abadityanisiweyo kwintengiso, Njengoko sithembisile, zonke iiHomme zeTymmones zethu zinefuthe zingekho ngaphantsi kwe-98%.
IHormones ineempembelelo ezininzi ezibalulekileyo kwimpilo yabasetyhini. I-hormone yesini esetyhini, i-estrogen kunye ne-progesterone, iyaziwa kakhulu ngenxa yeempembelelo zabo kwimpilo yokuzala yowesifazane, ukusuka kwimihla ukuya ekukhulelweni ukuya ekumeni. Kodwa umzimba wakho wenza kwaye isebenze nezinye iindidi ze-hormone ezichaphazela ezinye iinkalo zempilo-ukusuka kwinqanaba lamandla akho, ubunzima, imizwa kunye nokunye okuninzi. Uninzi lwenguqu kwiminyaka ekhokelela ekunqumeni kwimiqathango (ukuphela kwexesha) kuhanjiswa ngamanqanaba ama-hormone aveliswa ngama-ovari, ikakhulukazi i-estrogen.
Kudala bekucingelwa ukuba lolu phuhliso lwebele olusanda kuzalwa lusuka kuma-hormone wesifazane i powder (i-oestrogens) emzimbeni womama odlula kwi-placenta ngexesha lokukhulelwa nokukhuthaza ukuphuculwa kwebele kumntwana.
Ama-hormone abaluleke kakhulu ayenziwa ngama-ovari ayaziwa njengama-hormone eentlobano zesini (i-sex steroids) - kwaye ezimbini ezibalulekileyo zi-estrogen kunye neprogesterone. Ama-ovari avelisa enye yehomoni, i-testosterone.
Ngethuba lokukhulelwa, i-estrogen ikhuthaza ukuphuculwa kwebele kwaye ibangela ubulili, isisu (isibeletho) kunye nezibilini ze-Fallopian (ezithwala amaqanda esibelethweni) ukukhula.
Kwakhona kuthatha indima ekukhuleni kokukhula kwaye iguqula ukuhanjiswa kweenqatha kwiqumrhu lentombazana, ngokugqithiseleyo kubangele ukuba kubekho ngaphezulu kokufakwa kwiindawo ezinqamlekileyo, iintambo kunye namathanga. I-Testosterone inceda ukukhuthaza ukukhula kwemisipha kunye neethambo.
Estrogen. Njengoko i-hormone yokuqala "yesifazane", i-estrogen ikhuthaza ukukhula kunye nempilo yamalungu omzimba wesetyhini kwaye igcina isiswini sinyanyiswa, sinyuka (solule), kwaye sinikezelwa ngegazi. Amanqanaba e-Estrogen ayancipha ekupheleni kwexesha, kodwa akwenza ngendlela engavumelekanga. Ngamanye amaxesha kukho i-estrogen engaphezu kwexesha elidlulileyo kunokuba lidlulileyo.
Ukongeza kwi-estrogen, amanqanaba ama-hormone aveliswa ngama-ovari-progesterone (enye ihommonekazi yabesifazane) kunye ne-testosterone (i-hormone yowesilisa eveliswe kumanqanaba aphantsi kwabasetyhini) -yatshintsha kwakhona ngexesha lakho leminyaka eliphakathi, njengoko kuchaziwe kwitheyibhile elingezantsi.
I-intergesitone iyancipha kwi-progesterone echaphazela ixesha lokuya esikhathini kunokuba iyichaphazela umsebenzi wesini, kodwa ukunyuka kwe-age-testosterone kunokunciphisa i-libido (i-sex drive) kubafazi basetyhini, nangona oku kuqhubeka kungqubuzana. Inyaniso yokuba i-estrogen iyancipha ngaphezu kwe-testosterone ikhokelela abanye ukuba bakholelwe ukuba i-libido ayifanele iyancipha. Ukuhla kwe-testosterone kubasetyhini kunokuxhomekeka kuphela, kungekhona ukuxhomekeka kwimihla, kwaye kuqala iminyaka ngaphambi kokuphela kwexesha.
I-Estradiol powder (E2), kwakhona i-oestradiol, i-hormone ye-estrogen kunye ne-hormone yesini yamadoda. Kubandakanyeka ekulawuleni imijikelezo yokuzala yesisu kunye nesisu. I-Estradiol powder ijongene nokuphuhliswa kweempawu zesini zesibini zesini ezifana nezibilini, ukwandiswa kwezihlunu kunye nomzekelo wesetyhini wokusabalala kwabesetyhini kwaye kubalulekile ekuphuhliseni nasekugcinweni kwamancuba okuzala abesifazana afana nezilonda zamathambo, isisu , kunye nesisini ngexesha lokukhulelwa, ukudala, nokukhulelwa. Kwakhona kunemiphumo ebalulekileyo kwezinye izicubu ezinjengamathambo, amafutha, isikhumba, isibindi kunye nengqondo.
I-AASraw ngokuyinhloko inikeza i powders eluhlaza ye-estradiol powder, i-estradiol powder Benzoate, i-estradiol powder valerate, i-ethinyl estradiol powder, njl. Zonke ziqinisekisiwe zokuhlanzeka, umgangatho kunye nesigxina.
Ukubonisa 1-8 kweziphumo 20